Greetings from MSA administration – Mandalay International Science Academy
March 4, 2022 Wai Yan
Greetings from MSA administration.
Resuming Onsite, Blended Classes
Onsite classes withablended learning option will resume on Monday the 7th of March. The school will follow stringent measures against the spread of COVID-19. Please kindly make sure that your child brings the health-declaration form – the blue paper with parents’ signature, and puts the mask on. Also, please do not send your children to school if they show any signs of Covid-19 within the last7days. They can continue learning via online in the meantime.
Enrolment for New Academic Year
We would also like to inform you that enrollment is now open for next school year. To benefit from the March discount, please contact the school office via the following numbers.
Office Hotlines – 09 43060027, 09 449260423
Students’ Affairs – 09 43060423
Finance Hotline – 09 755838633
The school will close on Wednesday the 16th of March due to the Full Moon Day of Tabaung.
The school will not close on the 28th of March, as Armed Forces Day falls on Sunday and no more holiday compensation is practiced this year.
The last day of the school year will be the 8th of April 2022.
MISA Administration Team
MISA ကြောငျးအုပျပျခြုပျရေးအဖှဲ့မှ နှုတျခှနျးဆကျသအပျပါသညျ။
ကြောငျးတှငျး သငျကွားမှု ပွနျလညျ စတငျခွငျး
ကြောငျးတှငျး သငျကွားသညျ့ blended learning အစီအစဉျမြား လာမညျ့ တနင်ျလာနေ့ မတျလ ၇ရကျနတှေ့ငျ ပွနျလညျ စတငျပါမညျ။ COVID-19 ကူးစကျမှုမှ ကာကှယျရနျအတှကျ ကြောငျးတှငျး စညျးကမျးမြားအတိုငျး အတိအကြ လိုကျနာဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။ ကြေးဇူးပွု၍ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျကွောငျး ထောကျခံခကျြ (ကြောငျးမှ ထုတျပေးထားသော စာရှကျအပွာရောငျ) အား မိဘလကျမှတျနှငျ့တကှ မပကျြမကှကျ ထညျ့ပေးစလေိုပါသညျ။ အကယျ၍ လူကွီးမငျး၏ သားသမီးတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ သီတငျးပတျအတှငျး COVID-19 ရောဂါ လက်ခဏာ တဈစုံတဈခု ရှိပါက ကြေးဇူးပွု၍ ကြောငျးသို့ မလှတျသေးဘဲ အှနျလိုငျးမှ တဆငျ့သာ သငျယူစလေိုပါသညျ။
လာမညျ့ ပညာသငျနှဈသဈသဈအတှကျ ကြောငျးအပျ လကျခံပွီ ဖွဈကွောငျး ကိုလညျး အကွောငျးကွားအပျပါသညျ။ မတျလအတှကျ သတျမှတျသညျ့ discount အခြိနျမီ ရနိုငျစရေနျအတှကျ ကြောငျးရုံးခနျးသို့ ဆကျသှယျ အပျနှံနိုငျပါပွီ။
ကြောငျးရုံးခနျး – 09 43060027, 09 449260423
ကြောငျးသားရေးရာ – 09 43060423
ကြောငျး ဘဏ်ဍာရေး – 09 755838633
မတျလ ၁၆ရကျနသေ့ညျ တပေါငျးလပွညျ့နေ့ ဖွဈသညျ့အတှကျ ကြောငျးပိတျပါမညျ။
တပျမတျောနသေ့ညျ မတျလ ၂၇ရကျ တနင်ျဂနှနေတှေ့ငျ ကရြောကျပွီး အစားထိုးပိတျရကျ စနဈ မရှိတော့သညျ့အတှကျ မတျလ ၂၈ တနင်ျလာနတှေ့ငျ ကြောငျး မပိတျပါ။
ယခုစာသငျနှဈအတှကျ နောကျဆုံး ကြောငျးတကျရမညျ့နသေ့ညျ ဧပွီလ ၈ရကျနေ့ ဖွဈပါသညျ။
MISA ကျောင်းအုပ်ပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။
ကျောင်းတွင်း သင်ကြားမှု ပြန်လည် စတင်ခြင်း
ကျောင်းတွင်း သင်ကြားသည့် blended learning အစီအစဉ်များ လာမည့် တနင်္လာနေ့ မတ်လ ၇ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် စတင်ပါမည်။ COVID-19 ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကျောင်းတွင်း စည်းကမ်းများအတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက် (ကျောင်းမှ ထုတ်ပေးထားသော စာရွက်အပြာရောင်) အား မိဘလက်မှတ်နှင့်တကွ မပျက်မကွက် ထည့်ပေးစေလိုပါသည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏ သားသမီးတွင် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျောင်းသို့ မလွှတ်သေးဘဲ အွန်လိုင်းမှ တဆင့်သာ သင်ယူစေလိုပါသည်။
လာမည့် ပညာသင်နှစ်သစ်သစ်အတွက် ကျောင်းအပ် လက်ခံပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ မတ်လအတွက် သတ်မှတ်သည့် discount အချိန်မီ ရနိုင်စေရန်အတွက် ကျောင်းရုံးခန်းသို့ ဆက်သွယ် အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
ကျောင်းရုံးခန်း – 09 43060027, 09 449260423
ကျောင်းသားရေးရာ – 09 43060423
ကျောင်း ဘဏ္ဍာရေး – 09 755838633
မတ်လ ၁၆ရက်နေ့သည် တပေါင်းလပြည့်နေ့ ဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းပိတ်ပါမည်။
တပ်မတော်နေ့သည် မတ်လ ၂၇ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျရောက်ပြီး အစားထိုးပိတ်ရက် စနစ် မရှိတော့သည့်အတွက် မတ်လ ၂၈ တနင်္လာနေ့တွင် ကျောင်း မပိတ်ပါ။
ယခုစာသင်နှစ်အတွက် နောက်ဆုံး ကျောင်းတက်ရမည့်နေ့သည် ဧပြီလ ၈ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။
Comment Corriger Une Erreur De Configuration Côte
How To Use Group Policy Preference Enable Auto
Letter to Parent: 17 Oct 2021
By Wai Yan / 1 Comment